SOS Children’s Villages Somaliland waa Hay’ad caalami ah kana shaqeysa horumarinta arrimaha bulshada
SOS CV waxay Kobcin iyo Tababaro lagu xoojinaaya Awoodooda xagga wax soo saarka u samaysaa qoysaska aan awoodin inay caruurtooda siiyaan daryeelkii ay u baahnaayeen.
SOS CV waxay sare u qaadeysaa xuquuqda caruurta iyo dhalinyarta waxa ayna ku howlantahay ilaalinta xuquuqdooda. SOS Childrens’ Villages Somaliland, sidoo kale waxa ay magaalada Hargeisa ka fulinaysaa barnaamijka loogu magac daray “ The next Economy” oo ah barnaamij shaqo abuur iyo shaqo raadis ah
lagu tala galay dhalinyarta aan shaqeeynin ee dhameesatay heerarka wax barasho sida, Dugsiga farsamada gacanta, dugsi sare, iyo dhalinyarta dhigata ama dhammeesaty waxbarasho jaamacadda.
Haydaha SOS Children’s Villages Somaliland, waxa ay fulinaysaa mashruuca “The next Economy” iyaga oo tababaro siinaya dhalinyarta caqabaduhu ka heystaan in ay ku xidhmaan suuqyada shaqada ama u baahan in laga caawiyo si ay shaqo fiican u helaan ama ay u bilaaban lahaayeen ganacsigooda gaarka ah.
Haydaha SOS Children’s Village Somaliland, waxa ay ku wargelinaysaa dhalinyarada ku nool Magaalada Hargeisa in uu billaabanayo mashruuca “The next Economy” oo dhalinyarta ka taageeridoona dhinacyada shaqo abuurka iyaga oo qaadandoona tababaro kaladuwan muddo lix biilood ah socon doona oo ku saabsan,
Sannadkan 2021 waxaa la qaadanayaa wajigii labaad oo kooban 150 ( gabdho iyo Willal).
Jaamacadda dhamaystay ama dhigta
Diyaar u ah in uu dhamaysto tababarka
5. Waa in aanu shaqaynin wakhti xaadirkan.
Haddii aad danaynayso Fursadaan fadlan Soo soo buuxi link ka hoose ugu dambayn 07 May 2021.
5617 total views, 249 today